छ दशक अघिको नेपाल ( भिडियोमा ) | मेरो कलम
छ दशक अघिको नेपाल ( भिडियोमा )
Nepali June 3, 2013
– छ दशक अघि नेपाल कस्तो थियो होला ? बुवा हजुरबुवाको समय हामी नाती पुस्ताले कसरी थाहा पाउनु ? तरपनी मैले अनुभुती गर्न पाए । संग्राहलयमा झुण्डाईएका फोटोहरु हेरेर हैन, आफ्नै आखाँले भिडियो देखेर । भर्खरै एउटा युट्युव भिडियो हेर्ने मौका मिल्यो । निकै रोचक एवं जानकारी मुलक भिडियो जसमा पुर्वदेखी पश्चिम नेपालसम्मको भौगोलिक अवस्था, मानिसको चालचलन, लवाई खुवाई प्रश्टै अनुभुती गर्न सकिन्छ ।
क्यामरा एवं (अडियो/भिडियो) रेकडिङ सम्वन्धी प्रविधी त्यो समयमा नेपालमा भित्रिसकेको थियो होला तरपनी यसरी प्रयोगमा आएको थियो जस्तो लागेन । नेपालका अधिकाशं क्षेत्रमा भ्रमण गरेका पहिलो विदेशी नागरिक (स्विजरल्याण्ड) टोनी हेगनले भिडियो कैद गरेका रैछन् । सन् १९५० देखी १९६१ सम्म नेपालको विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्दैगर्दा कैद गरिएको भिडियोलाई डकुमेन्ट्री फिल्म बनाईएको छ ।
“नेपालको हिमालय क्षेत्रमा हिराजन्य बहुमुल्य खनिज पदार्थ पाईन्छ कि पाईदैन ?” भनेर अध्ययन गर्न आएको भएपनी नेपाली प्रकृती एवं समाज प्रती चै वढी झुकाव भएको उनले वताएका छन् । भिडियो हेर्दै गर्दा नेपालको सुन्दर प्रकृती, हिमालय पर्यावरण, मानिसको लवाई/खुवाई , धर्म एवं संस्कृती , शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्था जान्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मदन राज जोशीले युट्युवमा अपलोड गर्नुभएको यो भिडियो करिव छ दशक अघिको नेपाल कस्तो थियो भनेर हेर्न चाहनेहरुको लागी महत्वपुर्ण छ ।
दोश्रो भाग हेर्नुस्
रोचक लाग्दै थियो तर अरु भागहरु भने भेटिएन ।
यू–ट्युव सम्वन्धी १० रोचक तथ्यहरु
Nepali August 31, 2012
एकै क्लिकमा यूट्युवको भिडियो यसरी डाउनलोड गर्नुस्
Nepali August 8, 2015
Keshab Parajuli June 5, 2013 Log in to Reply
Very interesting and informative documentary ever watched
Dipak Thapa June 7, 2013 Log in to Reply
sir yastai content haru dherai raamra xan…priority dinu hola :)…ma regular visiter hudaixu..